समाज – Page 454 – Halkaro
खुल्यो र्इडीभी, भर्ने कसरी ?
काठमाडौँ, असोज १८ । सन् २०१८ को अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (इडीभी) कार्यक्रमको लागि आज मंगलबारदेखि आवेदन खुल्ने भएको छ । नेपालमा स्थानीय समयअनुसार ९:४५ बजेबाट आवेदन दर्ता सुरु हुने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले जनाएको छ । यो कार्तिक २२ मा नेपालमा स्थानीय समयअनुसार १०:४५ बजे बन्द हुनेछ । डि.भी. चिट्ठामा प्रवेश गर्नका लागि कुनै पनि […]
अझै त्यो जवानी हुन्थ्यो त ………………….
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ आश्विन सोमबार March 5, 2017
काठमाडौँ । उनीसँग अझै त्यो जवानी हुन्थ्यो त सायद दुई छाक पेट भर्नका लागि अरुको मुख ताक्नु पर्दैनथ्यो उनलाई । उनी अर्थात् प्रमिला (५४) । आज भन्दा २०१८ सालमा भक्तपुरमा जन्मिएकी प्रमिलालाई यो दुःख जीवनले दिन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन । २०३३ सालमा १५ वर्षको उमेरमा काभ्रेका युवकसँग प्रेम विवाह गरेकी उनलाई जब सँगै जीवन […]
सिद्धबाबामा पहिरो बस पुरियो
प्रकाशित मिति : २०७२, २३ श्रावण शनिबार October 4, 2016
विकाश पराजुली बुटवल । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको उपल्लो सिद्धबाबा नजिकै शनिबार पहिरो जाँदा यात्रु वाहक बस बगाएको छ । बसलाई पहिरोले तिनाउ नदीमा पुराएको छ । अहिले सम्म घटनास्थलबाट ५ जनाको शव निकालिसकिएको छ । लु १ ख ५७७१ नं. को माईक्रो पहिरोमा परेको हो । ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार अहिले उद्दारको काम […]
महिला पत्ररकारहरुको निर्देशिका भन्छ, ‘सिन्दुर पोते लगाउ’
प्रकाशित मिति : २०७२, २२ श्रावण शुक्रबार October 4, 2016
काठमाडौं । महिलाहरु समाजमा लैंगिक हिंशाले प्रडातित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा महिला पत्रकारहरु पनि अछुतो नहोलान् । यही परिस्थितीलाई हेर्दै ‘महिला पत्रकारको सुरक्षा निर्देशिका’ तयार भएको छ । सञ्चारकर्मी बद्री पौड्याल, भुवन केसी र हरिकला अधिकारीले तयार पारेको सुरक्षा निर्देशिकामा महिला पत्रकारलाई सुरक्षाका लागि सिंदुर पोतेलगायतको सिंगारमा ध्यान दिन भनिएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकामा […]
जिउँदै मरिरहेछन् मुस्लिम महिलाहरू
प्रकाशित मिति : २०७२, २१ श्रावण बिहीबार October 4, 2016
‘कुरानमा बाध्यता भए मात्र तलाक दिने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मनपरी भइरहेको छ । न मौलानाहरू बोल्छन् न त देशको कानुनले नै रोक्छ । मुस्लिम महिला जिउँदै मरिरहेका छन् ।’ निहुँ ठूलो थिएन । घर–झगडामा भनाभन भएको मात्र हो । रिसको झोँकमा बाँके जयसपुरकी २५ वर्षीया अर्सफुन अन्सारीलाई उनका श्रीमान् इस्लामले एकै सासमा तीनपटक […]
पहिरोमा परेर २३ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । अविरल बर्षासंगै आएको देशका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परी २३ जनाको ज्यान गएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार कास्की लुम्ले–६ र भदौरे तामागी–५ डुडाफाँट, बाग्लुङको रायोडाँडा र म्याग्दीको मुना–४ मा छुट्टाछुट्टै पहिरोमा परेर मृत्यु भएका २३ जनाको शव फेला परेको छ । त्यस्तै पहिरोमा परी भने १७ जना घाइते भएका […]